जिसस बैतडीमा कांग्रेस–माओवादी तालमेल, संयोजकमा कांग्रेसका बागी - स्थानीय निर्वाचन २०७४ - कान्तिपुर समाचार
जिसस बैतडीमा कांग्रेस–माओवादी तालमेल, संयोजकमा कांग्रेसका बागी
श्रावण २४, २०७४ खगेन्द्र अवस्थी
बैतडी — आइतबार हुने जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेका छन् । एमालेसित मिलेर कांग्रेसकै अर्का बागी उठेका छन् । गठबन्धनबाट प्रमुखमा कांग्रेसका सिद्धराज भट्ट र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर बोहराको उमेद्वारी दर्ता भएको छ । स्वतन्त्रबाट गजेन्द्रबहादुर चन्दको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
आइतबार हुने जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेका छन् । एमालेसित मिलेर कांग्रेसकै अर्का बागी उठेका छन् ।
गठबन्धनबाट प्रमुखमा कांग्रेसका सिद्धराज भट्ट र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर बोहराको उमेद्वारी दर्ता भएको छ । स्वतन्त्रबाट गजेन्द्रबहादुर चन्दको मनोनयन दर्ता भएको छ । चन्द कांग्रेसबाट सुर्नया गाउँपालिका १ मा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । एमालेले उपप्रमुखमा लक्ष्मणदत्त भट्टको उम्मेद्वारी दर्ता गराएको छ ।
९ सदस्यीय समितिमा कांग्रेस र माओवादीको सोमबार बसेको बैठकले प्रमुखसहित ७ सदस्य र उपप्रमुखसहित एक महिला सदस्य माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको थियो । कांगेसका १०, एमालेका ८ र माओवादी केन्द्रका २ मत छन् । मंगलबार उमेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ध्रुवकुमार शाहले बताए ।
कांग्रेसले जिल्लामा उमेदवार चयन गर्न नसकेपछि छनोटका लागि केन्द्रमा पठाएको थियो । केन्द्रबाट भट्टको नाम सिफारिस भएपछि चन्द बागी उठेका हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७४ १०:३६
‘त्रिवि संकटमा मानविकी संकाय’ पढ्दा त्यही संकायको शिक्षक हुनुका नाताले पीडा भयो नै । अझ पीडा त सिङ्गो त्रिविको हविगत देख्दा हुने गरेको छ ।
‘त्रिवि संकटमा मानविकी संकाय’ पढ्दा त्यही संकायको शिक्षक हुनुका नाताले पीडा भयो नै ! अझ पीडा त सिङ्गो त्रिविको हविगत देख्दा हुने गरेको छ । त्यसैले संकटमा मानविकी संकाय होइन, कठै त्रिविको हविगत भन्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दलको कोटामा पदाधिकारी बनेर आएपछि संस्थाप्रति होइन, उसैप्रति बफादार बन्ने विडम्बनापूर्ण परम्परा बस्यो । उनीहरूको काम त्रिविलाई समयानुुकूल बनाउँदै लैजाने र गरिमा बढाउने नभई निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने र दाताहरू अर्थात् पदाधिकारी बनाउने व्यक्ति र पार्टीलाई खुसी बनाउने हुनपुग्यो । फलत: ६० वटा आङ्गिक क्याम्पस चलाउने त्रिविले ११ सयभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दियो । त्रिविकै गरिमा बनेका पुलचोक र महाराजगन्ज क्याम्पसलाई कमजोर पार्न लाग्यो । अस्कल, त्रिचन्द्र, पिके क्याम्पसको पर्खाल जोडेर निजी क्याम्पस खोलियो । समयसँगै पदाधिकारी स्वयम्को आङ्गिकभन्दा निजी क्याम्पसतर्फ मोह बढ्न थाल्यो । शिक्षा क्षेत्र माफियाहरूको हातमा पुग्यो । विभिन्न संकायमा डिन नियुक्तिका लागि ठूलो चलखेल हुन थाल्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै अनशन बस्ने डा. गोविन्द केसीले समेत डिन नियुक्तिको माग राख्नुपर्‍यो । चाहेर वा नचाहेर, जानेर वा नजानेर शिक्षाक्षेत्र माफियाको हातमा पुगिसक्यो । मानविकी संकायमात्र होइन, त्रिवि नै त्यसको दलदलमा फँस्यो ।
– डा. ढाकाराम सापकोटा
आर.आर. क्याम्पस, काठमाडौं